Weather in Bali in November ~ Journey-Assist- fialantsasatra any Bali ny volana novambra
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Toetr'andro sy Bali » Weather in Bali tamin'ny Novambra
Weather in Bali tamin'ny Novambra
Tamin'ny volana novambra, dia tsy ampoizina ny toetrandro tany Bali. Efa mirotsaka amin'ity volana ity ny orana. Miposaka ny masoandro, mipoitra ny fahamaotinana. Mety fohy sy lava ny orana. Ny bisikileta lava lava dia tsy ilaina. Amin'ny tranga lehibe dia tokony hanome tahirizin-dasy ho azy ireo ianao. Ny torimaso tsy misy ny mari-pana dia lasa tsy mahazo aina. Fa mafana be ny rano. Ny rivotra mahery indraindray dia avy amin'ny ranomasina. Sarotra ny Surfing, mikorontana ny ranomasina.
Tamin'ny volana novambra, dia somary be ny hafanana amin'ny andro ary 33 ° mandritra ny andro ary 24-25 ° amin'ny alina. Ao amin'ny toeram-pitsaboana iray miaraka amin'ny toetr'androny avo amin'ny volana novambra any Bali, ny fepetra amin'ny dia an-tongotra ao anaty rivotra madio dia tsy mahazo aina.
Ny rano ao amin'ny ranomasina dia mitazona hafanana 27 ° Celsius, saingy noho ny orana matetika dia lasa mihanaka ihany. Teny an-dàlana, tamin'ny volana Novambra, nihetsika ny rivotra mahery setra, izay manelingelina ny ranomasina. Raha izany no resaka dia tsy mahazo aina ny fialantsasatra amoron-tsiraka rehetra amin'ny volana novambra.
Ny hamandoana ao Bali amin'ny volana novambra dia mitombo tsikelikely ary salanisa 80%. Indrindra io fitomboana io dia tsikaritra amin'ny alina feno zavatra. Raha tsy misy rivotra fantsona na valalabory dia tsy mahazo aina ny torimaso.
Vakansy tany Bali ny volana novambra
Zava-dehibe tokoa ny fanafoanana ny volana novambra. 179mm ny salanisan'ny volana isam-bolana, izay be dia be. Avy ny orana matetika, amin'ny alina fa amin'ny tolakandro ihany koa. Ny isan'ny andro maizina dia 14-15 isam-bolana. Ny zavona matevina sy rahona matevina dia tsy mahafaly ny tendrombohitra any Bali amin'ity volana ity.
Surfing any Bali tamin'ny Novambra
Nofaranana tamin'ny volana Novambra ny fotoam-pandrosoana. Matetika ny ranomasina dia tsy tandindonin-doza sy tsy voalahatra mialoha an'ity fanatanjahantena ity.